Hagaha Socdaalka Sumatra Halal eHalal Travel Mart
Dadka ku hadla luqadaha Austronesian waxay markii ugu horreysay yimaadeen Sumatra qiyaastii 500 BC, iyada oo qayb ka ah ballaadhinta Austronesian laga bilaabo Taiwan ilaa Koofur-bari Aasiya. Iyada oo ay ku taal Hindiya-Shiinaha marinka ganacsiga badda, magaalooyin ganacsi oo dhowr ah ayaa barwaaqoobay, gaar ahaan xeebta bari, waxaana saameyn ku yeeshay diimaha Hindida iyo gaar ahaan boqortooyada Budhistiga ee Srivijaya. Saamayntii reer Srivijayan waxay hoos u dhacday qarnigii 11-aad Sumatrana waxay markaas la wareegtay gumaysto boqortooyooyinkii Javanese. Islamarkaas islaamku wuxuu ku socday Sumatra isagoo sii maraya Carab iyo ganacsato Hindi ah qarniyadii 6aad iyo 7aad. Marco Polo wuxuu booqday jasiiradda 1292. Aceh Sultanate oo awood badan ayaa xukuntay laga bilaabo waqtigan illaa qarnigii 20aad. Imaatinka Nederlandka, dalal badan oo Sumatran ka mid ah oo si isdaba joog ah hoos ugu dhacay xukunkooda. Aceh, waqooyiga, ayaa ahayd caqabadda ugu weyn, maaddaama Nederlandku ay ku lug lahaayeen dagaalkii Aceh ee dheeraa ee qaaliga ahaa (1873–1903).
Sumatra waxay hoos tagtay maamulka 'Dutch East Indies' waxayna noqotay soo saaraha ugu weyn ee basbaaska, cinjirka, iyo saliida. Horraantii iyo badhtamihii qarnigii labaatanaad, aqoonyahannada iyo hoggaamiyeyaasha Sumatran waxay ahaayeen shakhsiyaad muhiim ah IndonesiaDhaqdhaqaaqyadii gobonimo doonka ka hor intaan xornimada buuxda la helin 1945.
Medan, oo ah magaalada ugu weyn jasiiradda, waxay leedahay duulimaadyada ugu badan oo ay ku jiraan adeegyo badan oo caalami ah Singapore, Malaysia, Iyo Thailand. Gegada Diyaaradaha Caalamiga ee Silangit ee u dhow Lake Toba, Batam, Palembang, Pekanbaru, Padang iyo Banda Aceh sidoo kale waxay leeyihiin adeegyo caalami ah. Bengkulu, Bandar Lampung, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jambi, Tanjung Pandan waxay leeyihiin duulimaad gudaha ah inta badan Jakarta.
Waxaa jira adeegyo bas oo ka baxa Java illaa qaybo kala duwan oo Sumatra ah. Halka inta badan asal ahaan ka soo jeedaan Jakarta, waxaa jira adeegyo ka socda Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya iyo Malang. Basaska badankood waxay kujiraan xaalad wanagsan waxaana badanaa lasiiyaa buste maxaa yeelay in kabadan safar maalin ah oo dhamaan rakaabku kuma raaxeysanayaan xaalada hawada. Basaska raaxada iyo xitaa kuraasta hurdada ayaa sidoo kale laga heli karaa wadada Banda Aceh - Medan.
Xidhiidhka doonta ee u dhexeeya dekedda Merak ee jasiiradda Java (100 km galbeed ka ah Jakarta) iyo Bakauheni ee koonfurta fog ee Sumatra (gobolka Lampung) waa la heli karaa 24 saacadood. Rakaabka iyo wadayaasha qaar waxay doortaan inay safraan habeenkii, maxaa yeelay ma ahan kuleyl.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira adeegyo doomo fara badan oo isku xiraya Sumatra iyo Malaysia iyo waliba jasiirado kale oo Indooniisiya ah. Dekedda ugu weyn waa Dumai oo ku taal Riau, taas oo fiiso ku timaada barta imaanshaha waxayna xiriir toos ah la leedahay Port Klang (3 saacadood), Port Dickson iyo Malacca (2 saacadood) gudaha Malaysia, iyo sidoo kale jasiiradda Batam ee Indonesia u dhow Singapore. Dakadaha kale ee leh adeegga doonta Malaysia waa Batam, Tanjung Balai Asahan, Bengkalis iyo Karimun.
Waxaa jira adeegyo doomaha saacadlaha ah Singapore ilaa Batam, Bintan, iyo Karimun.
Wadada weyn ee loo yaqaan Trans-Sumatran Highway, waa waddo dhan 2,508.5km, waxayna isku xirtaa jasiirada Sumatra oo dhan waqooyiga ilaa koonfurta. Wuxuu sii maraa inta badan magaalooyinka waaweyn sida Banda Aceh, Medan, Pekanbaru wuxuuna maraa ilaa Bandar Lampung. Haddii aadan aqoon waddooyinka, u isticmaal baabuur wadista. Kireyso gaari aan wade laheyn waa khatar, in kastoo waddadu wanaagsan tahay, maxaa yeelay waddooyinka qaar waxay isu beddelaan 90 digrii iyaga oo aan lahayn astaamo ku filan oo ha soconina habeenkii.
Adeegga tareenka ee kaliya ee waxtarka leh wuxuu ka socdaa Bandar Lampung oo ku yaal koonfurta koonfurta Sumatra illaa Palembang (400 km) iyo ilaa Lubuklinggau. Laga soo bilaabo Medan waxaa laga raaci karaa dhowr tareen maalintii Pematangsiantar, Tanjung Balai iyo Rantauparapat.
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Indonesia > Hagaha Socdaalka Sumatra Halal
Maha Sarakham Xalaal Hagaha Socdaalka